Tufaax | December 2019
Waa maxay faa'iidooyinka iyo waxyeelada tufaaxa
Apple waa miro aad loo jecel yahay oo la jecel yahay oo ku yaala cuntadayada oo dhan sanadka oo dhan noocyo kala duwan. Xilliga diiran, waxaad ku cuni kartaa miraha cusub ama duban, iyo xilliga qaboobuhu wuxuu yimaadaa noocyo kala duwan oo banaan. Si ay tufaaxu u keento jirka oo keliya faa'idada iyo dhibaatada waxay ahayd mid aad u yar, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso qaar ka mid ah xaddidaadyada.
Apple oo ay weheliyaan canab, muuska, mango iyo orange ayaa ka mid ah shanta nooc ee caanka ah ee ugu caansan caalamka. Wixii dalalkeena, tufaaxu waa miro hal mar. Waxaan ogaannaa dhadhankooda hore ee carruurnimada hore iyo ogaadaan in faa'iidooyinka tufaaxu ay aad u weyn yihiin. Nin wuxuu abuuraa geed tufaax ah dhowr kun oo sano.
Xeerarka loo beerto geedo tufaaxa guga: goorta la beero, sida loo abuuro, khaladaadka ugu weyn marka la beero
Haddii aad rabto inaad beerta xayawaanka tufaaxa ku dhajiso mid ka mid ah geedahaas, oo aad u hesho dalag badan, waa in aad marka hore ogaatid sida loo sameeyo si sax ah: sida loo abuuro geedka tufaaxa, marka si sax ah loo gooyo guga, meesha loo dooranayo, dhuuban iyo t.
Tufaaxa Rannetki: sharaxaad, sifooyin, beerasho
Tufaaxa rooga waxaa laga heli karaa jardiinooyin badan, gaar ahaan Siberia. Miro Tani waa duurjoogta badh, laakiin tufaaxa luminaayo dhadhankiisa iyo bandhigidooda. Geedka tufaaxa waxaa loo tixgeliyaa geedka midhaha aan qabsoomin, oo leh daryeel haboon wuxuu u dhali karaa shan iyo toban sano. Haddii aad qaadato manjooyin joogto ah iyo ka hortagga cayayaanka iyo cudurada, waxaad si dhab ah u heli kartaa goosashada wanaagsan sanado badan.
Sida loo sameeyo khamriga tufaaxa: cunto karinta guriga
Marka ereyga "khamriga" ee madaxa uu si dhakhso ah u kiciyo urur leh canab. Indeed, khamriga canabku waa nooca ugu caansan cabitaanka khamriga. Laakiin ma lahayn wax dhadhan fiican leh oo faa'iido leh qiyaasta macquulka ah ee khamriga laga soo qaado berry iyo miraha kale. Maanta waxaan ka hadalnaa sida loo sameeyo khamri cabitaan. Faa'iidooyinka iyo waxyeellada alaabta Cuntadu aad bay u hodan tahay fitamiinada iyo walxo kale oo faa'iido leh.
Sida loo ilaaliyo tufaax cusub ilaa guga
Goortii beergooyska aad u weynaa, waxaannu la yaabnay sida loo ilaaliyo tufaaxa cusub ee qaboobaha. Inta badan geedi socodka laftiisu waa u fududahay, laakiin dhab ahaantii waxaa jira waxyaabo badan oo ka reeban iyo xeerarka, ku guuldareysiga in la raaco taas oo horseedi karta luminta inta badan dalagga. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado noocyada tufaax leh tayada ilaalinta ugu fiican, iyo sidoo kale xaaladaha kaydinta iyo wax soo saarka.
Cunnooyinka iyo waxyaabaha gaarka u ah cunto kariska tufaaxa ee jiilaalka
Tufaax - mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee la awoodi karo ee khudradda dukaamada gudaha iyo suuqyada. Way kala duwan yihiin dhadhanka iyo cabbirka, iyo suxuunta laga sameeyay iyaga ayaa u qalma buug cunto karis gaar ah. Ka dib oo dhan, a miraha dhadhan fiican leh iyo casiir ma aha oo kaliya la cuni karaa cayriin, laakiin sidoo kale diyaariso noocyada kala duwan ee jams, pies, dubi foornada, qalalan iyo wax badan oo dheeraad ah.
Apple Moonshine ee guriga
Moonshine-ka Apple waxaa loo tixgeliyaa dad badan oo ah cabitaanka ugu wanaagsan. Iyo ugu muhiimsan - ugu awoodi karo, sababtoo ah beerta oo dhan waxay ku badan tahay tufaax, iyo xilliga qaboobaha midhaha this waxaa laga iibsan karaa ma kharash dheeraad ah. Waxaa jira nuuc yaryar - qashinka saxda ah. Guud ahaan, waxaad dhoobi kartaa alaab kasta, laakiin waa tufaaxa lagu qiimeeyo dhadhankiisa iyo dhadhanka cajiibka ah.
Waa maxay tufaaxa wax lagu dubo ee miisaanka lumay, xiliga uurka iyo xaaladaha kale
Maahmaah ahaan Ingiriis ah ayaa leh: "Cun 1 malab maalintii oo aad caafimaad qabtid." Tufaaxu waa miro aad u caafimaad badan, taas oo, sidoo kale, diyaar u ah qof walba. Maanta waxaan ka hadli doonaa tufaaxa la dubay - ma yihiin kuwo waxtar leh, sidee ayay u saameynayaan xubnaha kala duwan ee bini'aadamka iyo hababka, iyo sidoo kale xeerarka iyo xeerarka isticmaalka badeecadaas.
Sidee loo tirtiraa casiir tufaax ah iyada oo aan la taaban saxaafadda iyo juicers guriga
Caajis kaliya ma ogaanayo faa'iidooyinka miro iyo khudaarta cagaaran. Laakiin miyuusiyaadka lagu soo bandhigay dukaanku waxtar ma leh? Maanta waxaan ka hadli doonaa is-diyaarinta casiirka tufaaxa iyadoo la adeegsanaayo habab sahlan oo macquul ah, iyo faa'iidooyinkeeda ka sarreeya cabitaanka kaydka ee bacaha. Badeecadda la kariyay ama la shiiday ee casiirka ah ee bacaha waa wax aad u badan oo ah sheyga labaad, taas oo ah, waxaa laga sameeyey alaabta ceeriin ee haray ka dib markii si toos ah cadaadiska miraha.
Halabuurka, faa'iidooyinka, wax lagu kariyo cabitaanka tufaaxa
Qaar yar ayaa diidaya faa'iidooyinka cabitaanka tufaaxa. Waxaa la rumeysan yahay in haddii aad cuni lahayd tufaax maalin, waxaad illoobi kartaa jirooyinka iyo booqashada dhakhaatiirta muddo dheer. Maxaan ka dhihi karaa cabitaanka tufaaxa - waa maaddo waxtar leh oo laga helo miraha this. Tufaaxa waxaa laga heli karaa gobolkeena oo idil ku dhawaad ​​sanadka oo dhan, qiimo yar oo tayo lehna la aqbali karo, sababtoo ah qof kastaa wuxuu awoodi karaa inuu ku raaxaysto cabitaan wanaagsan.
Qof kastaa wuxuu maqlay waxtarka aan la garanayn ee tufaaxa jirka jirka, taas oo aan lagu sheegi karin khamriga adag. Inkasta oo inta badan badi diidmada oo dhan isaga ku xidhan tahay xadgudubyo badan oo tayo iyo tayada, si kastaba ha ahaatee, sumcadda xun ee khamriga ayaa ka badan erayo naxariis leh oo ku saabsan isaga. Hase yeeshee, haddii aad tufaaxa ku dareysid tufaaxa tufaaxa ee vodka, markaa waxaan helaynaa cabitaan weyn oo ah soo saaraha, kaas oo nuugay dhammaan tayada ugu fiican ee tufaaxa iyo waxtar, taas oo weli ku jirta khamriga.
Diyaaradan tufaaxa ah ee dhadhanka leh ee qaabka tufaaxa caanaha leh ee caanaha leh ayaa aad u jilicsan dhadhanka, waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa "sissy". Waxay u fiican tahay canjeelada, canjeelada iyo macmacaanka. Waad ku dhejin kartaa sida buuxsamayey ama aad lakulantay moofo, ama waxaad cuni kartaa kaliya qaadada. Ilaalinta noocan ah waa sahlan tahay in lagu kariyo kariyaha ama mashiinka qafiifka ah.
Sida loo karsado salaashka tufaaxa "Shan daqiiqo": talaabo talaabo qaadasho leh sawiro
Caan ka mid ah macaanka tufaaxa "Pyatiminutka" ayaa la sharraxay, marka hore oo dhan, iyadoo waqti gaaban ee daaweynta kulaylka, taas oo u ogolaanaysa in ay u ilaaliso heerar badan oo badan oo ka mid ah sifooyinka wanaagsan ee miraha ka samaysan. Intaa ka sokow, sheyga fudud ee aan u baahneyn xirfado gaar ah oo cunno, oo ay weheliso natiijo dhadhan fiican leh, wuxuu ka dhigayaa midaan ka mid ah kuwa ugu caansan guriga.
Habka ugu macquulsan ee loo kaydiyo tufaaxa waa macmacaan. Carafka macaan iyo dhadhanka wanaagsan waxay xasuusin doonaan xagaaga waxayna soo bandhigi doonaan farxad run ah. Waxaan soo bandhigi doonaa cuntada fudud ee hab fudud iyo raashin aad u qurux badan leh. About dhadhan Si aad u samayso suugada tufaax, ma aha lagama maarmaan in la doorto noocyo caan ah oo macaan.
Suugada Macmalka: Waxyaabaha qarsoon ee guriga lagu kariyo
Winter waa wakhti ay suxuunta kala duwan loo diyaariyo fasaxyo badan. Waxay dhacdaa in Olivier iyo xayawaanka ay ka daalaan jaakad dhogorta - Waxaan doonayaa inaan tijaabiyo wax cusub, laakiin isla mar ahaantaana isticmaalaya alaabta la yaqaan oo la awoodi karo, sida tufaaxa. Waxaad tixraaci kartaa raashinka dalal kale. Tusaale ahaan, samee furtaan.
Cunto karinta tufaaxa ee mashiinka qafiifka ah: Tallaabo tallaabo tallaabo ah
Apple, dabcan, waa mid ka mid ah midhaha ugu caansan adduunka. Marka lagu daro isticmaalka cusub, alaabooyin kala duwan ayaa laga sameeyaa miraha kuwan oo kala duwan: kala-soocid, ilaalinta, khudradda la qalajiyey, iwm. Macmacaanka Apple waa mid aad u baahsan. Isticmaalka nambarku wuxuu si fudud u fududeynayaa habka diyaarinta - waxaan tixgelin doonaa waxyaabaha ku jira maqaalka.
Cunto karinta tufaaxa ku jirta mashiinka qafiifka ah
Ku buuxi koob shaah kulul ah habeenkii jiilaalka qabow oo si xasuus ah diirimaad u leh macaanka hore ee tufaaxa tufaaxa xagaaga. Cunnooyinka macmacaan, qaro weyn iyo macmacaan badani waa kuwo badan, waxayna dhammaantood aad u fudud yihiin diyaarinta, laakiin, waa la kariyey qaboojiyaha qunyar-socodka ah, ma keeni doono dhibaato dheeraad ah oo ka soo baxaysa mid aad u fiican oo caafimaad leh.